ဗိသုကာ အနုပညာအာရုံ - အိမ်နှင့်ဥယျာဉ်အတွက်စိတ်ကူးများ
လူနေအိမ်ဗိသုကာ။ ဆောက်လုပ်ရေး။ မူလစာမျက်နှာ အိမ်တအိမ်နှင့်ဗီလာအတွက်အကြံဥာဏ်များ။ မျက်နှာကျက်၊ လသာဆောင်နှင့်ကျန်ကြွင်းသောနေရာများအတွက်အကြံဥာဏ်များ။
2sq.m. တွင်အိပ်ခန်း ၂ ခန်းပါသောကျဉ်းမြောင်းသောတစ်ထပ်အဆောက်အ ဦး စီမံကိန်း။
အိပ်ခန်း ၃ ခန်းပါ ၀ င်သောအခန်းတစ်ခန်းပါသောအိမ်တစ်အိမ်အတွက်စီမံကိန်း
အိပ်ခန်းနှစ်ခန်းနှင့် ၆၄ စတုရန်းပေပါသောကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောအိမ်၏စီမံကိန်း လူနေareaရိယာ
အိပ်ခန်းနှစ်ခန်းနှင့် 64sq.m. ပါသောကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောအိမ်၏ဤစီမံကိန်း
အိပ်ခန်း ၄ ခန်းပါ ၀ င်သော mezzanine ပါ ၀ င်သည့်လှပသောနှစ်ထပ်အိမ်တစ်အိမ်စီမံကိန်း
ကျွန်ုပ်တို့သည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောလှပသောနှစ်ထပ်အိမ် ၄ လုံးပါ ၀ င်သောစီမံကိန်းတစ်ခုကိုတင်ပြသည်
နှစ်ထပ်ပါ ၀ င်သောချစ်စရာကောင်းသည့်တစ်ထပ်တိုက်အိမ်တစ်လုံး၏ကောင်းမွန်သောစီမံကိန်းကိုကျွန်ုပ်တို့တင်ပြသည်
85sq.m. အောက်တွင်အိပ်ခန်းနှစ်ခန်းပါသောကျဉ်းမြောင်းသောတစ်ထပ်အဆောက်အ ဦး စီမံကိန်း။
အိပ်ခန်းနှစ်ခန်းနှင့် ၆၀ စတုရန်းမီတာရှိသောစုံလင်သောကျစ်လစ်သောအိမ်၏စီမံကိန်း လူနေareaရိယာ
၉၀ စတုရန်းမီတာထက်နည်းသောအိပ်ခန်း ၃ ခန်းပါ ၀ င်သောချစ်စရာကောင်းသည့်တစ်ထပ်တိုက်အိမ်ယာစီမံကိန်း။
အိပ်ခန်း ၃ ခန်းပါ ၀ င်သောချစ်စရာကောင်းသည့်တစ်ထပ်တိုက်အိမ်၏စီမံကိန်းကိုတင်ပြသည်
အိပ်ခန်း ၃ ခန်းပါ ၀ င်သောဂိုဒေါင်တစ်ထပ်ပါသောအထပ်တစ်ထပ်အိမ်အရံတစ်ခု
အိပ်ခန်း ၄ ခန်းနှင့်ကားဂိုဒေါင်ပါသည့်လှပသောထပ်ခိုးအိမ်စီမံကိန်း
127sq.m တွင်အိပ်ခန်းသုံးခန်းပါ ၀ င်သောစတိုင်ကျသောတစ်ထပ်အိမ်တစ်အိမ်စီမံကိန်း။
အိပ်ခန်း4ခန်းနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်များအတွက်ထပ်ခိုးအသံအတိုးအကျယ်နှင့်အတူဇိမ်ခံအိမ်၏စီမံကိန်း
လူကြီးမင်းတို့အိမ်၌ ၄ ခုပါ ၀ င်သောဇိမ်ခံအိမ်ကြီးတစ်လုံးကိုတည်ဆောက်ပေးပါသည်
အိပ်ခန်း ၃ ခန်းပါ ၀ င်သော ၁၇၁ စတုရန်းပေကျယ်ဝန်းသောတစ်ထပ်အိမ်တစ်လုံး၏ပြီးပြည့်စုံသောစီမံကိန်းဖြစ်သည်။
တင်ပြထားသည့်အိပ်ခန်း ၃ ခန်းနှင့်ကားဂိုဒေါင်ပါသောတစ်ထပ်အိမ်တစ်အိမ်၏စီမံကိန်း
ကျွန်ုပ်တို့သည်ထပ်ခိုးပါသောထပ်ခိုးပါသောအိပ်ခန်း ၅ ခန်းပါသောအိမ်၏ဤအံ့ဖွယ်စီမံကိန်းကိုတင်ပြသည်
အိပ်ခန်းလေးခန်းပါကားဂိုဒေါင်ပါ ၀ င်သောခေတ်သစ်အိမ်၏စီမံကိန်းနှင့်အတူတင်ပြသည်
1 မှ 17 စာမျက်နှာ1234510ရှေ့သို့»နောက်ဆုံး